Madaxweynaha oo maanta baarlamaanka horgeeynaya ra’iisul wasaaraha uu soo magacaabay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweynaha oo maanta baarlamaanka horgeeynaya ra’iisul wasaaraha uu soo magacaabay
Waxaa maanta lagu wadaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo uu furo kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoona kadib baarlamaanka ka codsan doonno in codka kalsoonida ay siiyaan ra’iisul wasaaraha cusub uu dhawaan soo magacaabay ee Xasan Cali Kheyre.
Waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka ay sida weyn ay u isticmaalaan dadka shacabka ah ayaa maanta xiran, waxaana waddooyinkaasi maanta lagu daadiday ciidamo badan oo isugu jira nabad-sugid iyo kuwa booliis ah.
Madaxweyne Farmaajo oo dastuuriyan ay tahay inuu isagu furo kalfadhiga koowaad aa baarlamaanka, ayaa hadane ajendayaasha maanta looga hadli doonno kalfadhigaasi ayaa waxaa ka mid ah in codka kalsoonida ah loo qaado ra’iisul wasaaraha magacaaban Xasan Cali Kheyre.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa intooda badan maanta laga codsaday in 9-ka subaxnimo ay diyaar kusoo noqdaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, islamarkaana ay illaaliyaan waqtiga ballanta.
Xilliyada soo socdo ayaa la filayaa in kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka uu si toos ah u furmo islamarkaana uu halkaasi khudbad ka jeediyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Illaa iyo haatan lama oga in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay codkooda kalsoonida ah siin doonaan ra’iisul wasaaraha magacaaban Xasan Cali Kheyre iyo inkale, balse qorshaha ayaa ah in maanta la horgeeyo baarlamaanka oo maanta kalfadhigoodii koowaad ku yeelanaya xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa la filayaa in markii uu helo codka kalsoonida ah ee baarlmaanka Soomaaliya, inuu sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo dhiso xukuumad tayo leh oo ka tarjumeeysa shacabka Soomaaliya, waxaana markii uusoo dhiso xukuumadaasi iyadane la horgeyn doonaa baadlamaanka, si codka kalsoonida ah ay u siiyaan.